Hetsika iarahana amin’ny Kolo TV/FM: nanaraka ny dian’ny reniny amin’ny fifaninanana Miss i Mirana | NewsMada
Hetsika iarahana amin’ny Kolo TV/FM: nanaraka ny dian’ny reniny amin’ny fifaninanana Miss i Mirana
Tarana-boanjo foto-boanemba… Voahosotra ho “Miss jeunesse Madagascar” ho an’ny eto Antananarivo niarahana amin’ny Kolo TV/FM Ratsimbarison Miraniaina Diana. Efa nandray anjara tamin’ny fifaninanana tahaka azy koa anefa ny reniny, Andrianiaina Farasoa Rosa.
“Efa voafidy ho “Miss vacances” aho raha vao 14 taona monja. Nitohy indray izany teo amin’ny faha-16 taonako, nibata ny “Miss crown”. Anisan’ny nifaninana tamin’ny Miss de miss Mada koa aho ary nisolo tena an’i Fianarantsoa ka nahazo ny “1ere dauphine”, hoy ny renin’i Mirana, Andrianiaina Farasoa Rosa. Faniriany ny ho lasa “Hotesse de l’air” satria anisan’ny lalana ahatongavana amin’izany ny fananany endrika amam-bika sy ny hatsaran-tarehy. “Misahana masoivoho ho an’ny tovovavy ho amin’ny fandraisana olona amin’ny fety aman-danonana, na hetsika ireny aho izao. Marobe ireo miantso anay amin’izany, indrindra amin’ny VIP. Tiko rahateo ny mikarakara endrika amam-bika… Manampy izany ny fikarakarako ny sehatry ny taovolo”, hoy ihany izy. Telo mianadahy ny zanany ka vavitokana sady voalohany Ratsimbarison Miraniaina Diana nahazo ny “Miss jeunesse Madagascar”. Mianatra momba ny sehatry ny serasera sy ny fifandraisana izy ary nanaraka ny reniny koa noho ny endrika amam-bika sy ny hatsaran-tarehy ananany amin’ny fifaninana Miss.
Te hanampy ny hafa eo anivon’ny fiarahamonina
Manana ny antony nandraisany anjara tamin’io fifaninana io koa anefa i Mirana. “Maniry ny hanampy ireo sembana amin’ny saina na vatana aho satria hitako fa manana fahasahiranana eo amin’ny fiatrehana ny fiainana izy ireny”, hoy izy. Tafiditra ao anatiny fifaninanana “Miss jeunesse Madagascar” rahateo ary fepetra takina ny fananana tetikasa momba ny lafiny sosialy na ny mifandraika amin’izany. Na izany aza, mbola dingana ihany ny nahazoany misolo tena an’Antananarivo fa mbola hisehatra ny fifaninana manerana ny Nosy izy.